Iiofisi zeposi zaseIndipolitiki? Nazi iindawo ezingama-32
Eunited States E-Indiana Indianapolis
Iiofisi Zase-Indianapolis: 32 apho Unokufumana khona
Qala ngeposi eposini enkulu eNtshona Street Street, kufuphi nebala
Oku kuluhlu lweeofisi zepostile eziphakathi kwimizila engama-15 e-Indianapolis, kunye needesi zabo kunye neeyure zokusebenza. Iifowuni zeposi zincinci zitshintsha, kodwa ngokuqinisekileyo, ungafuna ukubiza phambili; jonga inombolo yakho yefowuni yendawo yepostile kunye nomfaki-ndawo kwindawo ye-intanethi ye-USPS.
Ngolunye ulwazi, fowuna 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777). Unako ukubiza le nombolo ukuba inikwe into evuliwe okanye ithunyelwe kwelinye idilesi, kunye nezinye iinkonzo. Igama kwizilumko, ukuba uthumele into ofumana irisidi, gcina irisithi. Iya kuba nenombolo yokulandelela ukwenzela ukuba unokuxelela xa imvulophu okanye iphakheji yakho ihanjiswe okanye ingaba yayilibazisekile. Ukuba usithumele into ethile ngosuku olunikeziweyo olungaqinisekanga, ungayifaka iirisithi yakho yokubuyisela imali.
I-Ofisi yePosenti ePhambili: I-West Street Street (i-Circle City)
Iiyure: Ngomso-Ngomhla, ngo-8 ukuya ku-6: 30 ebusuku
Le yiyona ofisi enkulu yeposi. Efumaneka kufuphi neLucas Oil Stadium, kwintsimi yasekhaya ye-NFL yase-Indianapolis Colts, yenye yeyona ofisi ephezulu kakhulu e-Indianapolis. I-self-service kiosk ifumaneka apha, enokuba luncedo xa kunemizila ende. Iiyure zokusebenza zihlala zihambelana ngokufanelekileyo kwiiofisi zezithuba, kodwa ukuqinisekisa iiyure okanye ezinye iinkcukacha malunga neofisi zengingqi zendawo yase-Indianapolis, sebenzisa indawo yokufumana indawo kwi-website ye-USPS.
Isitalato saseMntla weMeridian (iCycle City)
456 N. Meridian St.
Iiyure: Ngomhla-Ngomhla, ngo-8 ukuya ku-5 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-1 ntambama
03 ka 32
I-East LeGrande Avenue (Garfield)
1636 E. LeGrande Ave.
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-4: 30; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-1 ntambama
Ivenkile yeSouth Belmont (eNtshona Indianapolis)
1144 S. Belmont Ave.
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-1 ntambama, ngo-2 ukuya ku-4
05 ka 32
UDkt Martin Luther King Jr. Street (Mapleton)
2650 uDkt Martin Luther King Jr. St.
Iiyure: Ngomso-Ngomhla, ngo-8: 30 ekuseni-4: 45; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-1 ntambama
I-East 10th Street (Linwood)
4401 E. 10th St., Suite 18
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-9 ukuya ku-5 ntambama; Ngomhla-9 ekuseni-1 ntambama
IWest Street ye-16 (Rainbow)
3322 W. 16th St.
Iiyure: Ngomhla-Ngomhla, ngo-8 ukuya ku-5 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-ntambama
08 ka 32
I-North Sherman Drive (iBrightwood)
2830 N. Sherman uDkt.
Iiyure: Ngomhla-kuLwesihlanu, ngo-9 ukuya ku-4: 30 ebusuku; Ngomhla-9 ekuseni-1 ntambama
I-Street Street (Beech Grove)
Beech Grove, IN 46107-9998
Iiyure: NgoLwesihlanu-NgoLwesihlanu, 8: 30-5: 30; Ngomhla, ngo-9 ukuya ku-3 ntambama
North Shortridge Road (Eastgate)
740 N. Shortridge Rd.
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-6 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-2: 30 ntambama
East Edgewood Ave. (Southport)
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8 ukuya ku-7 ntambama; Ngomhla-9 ekuseni-3 ntambama
I-East 55th Street (Bacon)
2727 E. 55th St.
Iiyure: Ngomhla-kuLwesihlanu, ngo-8: 30 ekuseni-5: 30 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-2: 30 ntambama
Fortune Circle East (iPallet Fletcher)
Iiyure: Ngomso-Ngomhla, ngo-8 ukuya kwe-8 ntambama; Ngomhla-9 ekuseni-1 ntambama
West Street Street (Speedway)
6110 W. 25th St.
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-6 ntambama; Ngomhla-9 ekuseni-3 ntambama
I-Carrollton Avenue (i-Broad Ripple)
6255 uCarrollton Ave.
Iiyure: Ngomhla-kuLwesihlanu, ngo-9 ukuya ku-4: 30 ebusuku; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-1 ntambama
Southeastern Avenue (Wanamaker)
7950 kumzantsi-mpuma we-Ave.
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-6: 30; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-1 ntambama
17 kwe 32
Gateway Drive (Eagle Creek)
6401 Gateway uDkt
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-5 ntambama; Ngomhla-9 ekuseni-2 ntambama
Street McCoy (Lawrence)
4430 McCoy St.
Iiyure: Ngomhla-kuLwesihlanu, ngo-8: 30 ekuseni-5: 30 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ngomhlaka-1: 30 ebusuku
IWest Washington Street (iBradport)
8804 W. Washington St.
I-Tansel Road (iCermermont)
3239 Tansel Rd.
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-5 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-1 ntambama
East 86th Street (Nora)
1300 E. 86th St., Suite 36A
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8 ukuya ku-7 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ukuya ku-3 ntambama
E-East Washington Street (Cumberland)
11600 E. Washington St.
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-6 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ukuya ku-3 ntambama
23 we 32
Umzila waseMooresville (eNew Newton)
7636 Mooresville Rd.
West Newton, IN 46183-9998
Iiyure: Ngomso-Ngomhla, ngo-8 ekuseni-ntambama, 1: 15-4: 30 ntambama
West Street Street (Greenwood)
345 W. Main St.
Greenwood, IN 46142-3111
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-4 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-ntambama
IBash Street (Castleton)
8710 Bash St.
Iiyure: Ngomhla-Ngomhla ka-8 ekuseni-7 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ukuya ku-3 ntambama
East 65th Street (Oaklandon)
12125 E. 65th St.
I-North Carr Road (Plainfield)
700 N. Carr Rd.
Plainfield, IN 46168-9998
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-6 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ukuya ku-12: 30 ebusuku
I-Medical Drive (iKarmele)
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8 ukuya ku-7 ntambama; Ngomhla, ngo-8 ekuseni
East Northfield Drive (iBrownsburg)
411 E. Northfield uDkt.
Brownsburg, IN 46112-9998
Iiyure: Ngomhla-ku-Fri, ngo-9 ukuya ku-7 ntambama; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-1 ntambama
UMzantsi Westside Drive (ePalestina entsha)
17 S. Westside uDkt.
Elitsha iPalestina, IN 46163-9998
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8: 30 ekuseni-4: 30; Ngomhla, ngo-9 ekuseni-ntambama
West Oak Street (Zionsville)
Zionsville, IN 46077-1838
Iiyure: Ngomhla-kuLwesihlanu, ngo-9: 6 ukuya ku-6: 30; Ngomhla-9 ekuseni-1 ntambama
East 116th Street (Abadobi)
8500 E. 116th St.
Iiyure: NgoLwesihlanu-ntambama, ngo-8 ukuya ku-7 ntambama; Ngomhla, ngo-8 ekuseni-3 ntambama
Izinto ezikhululekile zokwenza eNdiyapolis
I-Indianapolis Zoo Iza Kuphila Kwi-ZooBoo
I-Top-Notch Special-Occasion Restaurants
Iindawo zokutyela zase-Indianapolis apho abantwana badla ngeenqanawa ngoLwesibili
Izinto Ezilishumi Ozozenzayo kwaye Jonga e-Indianapolis
Imibhiyozo yoSuku kaBawo e-Indianapolis
Alamo Drafthouse - iDowntown eAustin
Iingcebiso zokufika eLas Vegas ukusuka eSan Diego
I-Parglades National Park: Iingcebiso zokutyelela
Ama-cinema ama-5 aphezulu angaphandle kwiColorado
Iiveki ezili-10 zoNwaba zeNtsebenzo zokuwa kweeNtsapho zabaNtwana kunye nabantwana
Fumana amaGates namaxesha e-American Airlines Flights
Iindwendwe Ezinkulu zaseTaliyane Ukutyelela Ekuhambeni Kwendlela Yakho
Iindlela ezigqibeleleyo zokuchitha iiNtsuku ezi-5 ezikhethileyo kwi-Oahu
I-Adelaide Feast Festival 2016 - Adelaide Gay Pride 2016
Australia kunye neNew Zealand
Ixesha Elililungele Ukuthenga Iindiza Zomhlaba Wonke?
I-Kansas City Leaf kunye neShedyuli yoHlelo lweBrush
Yintoni i-Puerto Rican Dish Mofongo?